प्रचण्डलाई अमेरिकामा ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ को सर्कुलर ! – Setosurya
अमेरिकी दुतावास स्रोतका अनुसार, प्रचण्डका लागि अमेरिकाले विशेष रुपमा जारी गर्ने ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ भन्ने आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ । जुन भारतीय उच्च नेताहरु सोनिया गान्धी, नरेन्द्र मोदीलगाएत अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरु अमेरिका भ्रमणमा जाने क्रममा जारी हुने गरेको छ । अमेरिका भ्रमणका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कानूनी झमेला हटाउन विरलै मात्र यस्तो सर्कुलर जारी गरिन्छ । यस्तो सर्कुलर पछि अमेरिकी सरकारका कुनैपनि निकायले कारवाही अगाडि बढाउन मिल्दैन ।
प्रचण्डको भ्रमण अगाडि अमेरिकी राजदुत रेन्डीबेरीले प्रचण्ड निवासमै पुगेर भेट गरी अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनैपनि झमेला नहुनेमा विश्वस्त पार्दै भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले विशिष्ट सम्मानका साथ स्वागत गर्ने बताएका थिए । लगत्तै दूताबासको सुरक्षा निकायले यस्तो खालको सर्कुलर जारी गरेको थियो । जुन इमिग्रेशन लगाएत सुरक्षा सम्बद्ध अमेरिकी सरकारी निकायहरुमा पुगिसकेको छ । पत्नी सीता दाहालमा देखिएको रोगको उपचारका लागि आफू अमेरिका जान लागेको अमेरिका जानुपूर्व प्रचण्डले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग बताएका थिए ।
पत्नी सीताले एकपटक अमेरिका लैदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेर जीकिर गर्न थालेपछि अमेरिका लाने प्रवन्ध गरिएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
अमेरिका जानका लागि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले वातावरण बनाएर सहयोग गरेको र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतले यसका लागि सहयोग गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
भेनेजुएला प्रकरणपछि नेपालको सम्बन्ध अमेरिकासँग चिसिएको छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिएका बेला सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि प्रचण्ड अमेरिका गएपनि उनले राजनीतिक भेटवार्ता गर्नसक्ने छन् । प्रचण्डका अनुसार नै सम्भव भयो भने दुई देशको सम्बन्धका बारेमा अमेरिकी अधिकारीसँग कुरा सक्छ ।
सुर्खेतमा एमालेको शक्ति प्रदर्शनः एमालेका चुनौति-कांग्रेसलाई खुम्च्याउने, माओवादीलाई रोक्ने
नेकपा बाग्लुङ्गको अध्यक्षमा कृष्ण पाठकको दाबेदारी बलियाे
सामुदायिक विद्यालयमा पर्वतकाे नव जागृत माबि ४ नम्बर प्रदेशकै उत्कृष्ट ……..
कटुवाचौपारीमा एक करोडको लागतमा एकीकृत कृषि फार्म शुरु
३३४ तहमध्ये अब धरान उपमहानगरपालिकाको परिणाम आउन बाँकी, यस्तो छ अवस्था
मैदानमा उत्रिए देउवा, ओली र प्रचण्ड: के गर्दैछन् बाबुराम, कमल थापा र उपेन्द्र यादव ?
राजविराजमा शीर्ष नेतृत्वको सामूहिक हत्याको प्रयास भयोः एमाले
असिना पानीले पर्वतमा करोडौंको क्षती
डीआईजी नवराज सिलवललाई पक्राउ गरिएकोमा एमालेको आपत्ति